သင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွင် ခွဲခွာခြင်းစိတ်ပူပန်မှုကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ (2022)
ပင်မစာမျက်နှာခွေးကျန်းမာရေးသင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွင် ခွဲခွာခြင်းစိတ်ပူပန်မှုကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ (2022)
ခွေးလေးက ပြတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းကြည့်ရင်း ပိုင်ရှင်ကို စောင့်နေတယ်။
သင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွင် ခွဲခွာခြင်းစိတ်ပူပန်မှုကို မည်သို့ကာကွယ်မည်နည်း။
Separation Anxiety ဆိုတာ ဘာလဲ
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ အဘယ်ကြောင့် စိုးရိမ်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။
ခွဲခွာခြင်း စိတ်ပူပန်မှုကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များတွင် ခွဲခွာရခြင်းကြောင့် စိတ်ပူပန်မှုသည် ကိုင်တွယ်ရန် အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည့် အဖြစ်များသော အပြုအမူပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် ခေါင်းစဉ်ကို မိတ်ဆက်ပြီး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း၊ ခွဲခွာခြင်းအတွက် စိုးရိမ်သောကလက္ခဏာများ ပြသနိုင်ခြင်း၊ နှင့် ဤအခြေအနေအသစ် သို့မဟုတ် ရှိပြီးသား အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးပါမည်။
ခွဲခွာခြင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဒဏ်ကို ခံစားနေရသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် ဆက်ဆံရာတွင်လည်း နည်းဗျူဟာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကို လွှမ်းခြုံထားလိမ့်မယ်။ ခွေးများအတွက် သဘာဝအတိုင်း စိတ်ငြိမ်ဆေးများ သင်နှင့် သင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ စိတ်ပူပန်မှုကင်းသောဘဝတွင် ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ရန် အိမ်မှထွက်ခွာသည့်အခါ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ပိုင်ရှင်မရှိသည့်အခါ ခွဲခွာခြင်းစိုးရိမ်စိတ်သည် အလွန်အကျွံဒုက္ခ သို့မဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပြသထားသော ပုံမှန်အပြုအမူကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။
များသောအားဖြင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ပိုင်ရှင်သည် အလုပ်မှထွက်ခြင်း (သို့မဟုတ် နောက်ထပ်ကြာရှည်စွာပျက်ကွက်ခြင်း) နှင့် ပြန်လာခြင်း (သို့မဟုတ် နောက်ထပ်မျှော်လင့်ထားသောပြန်လာခြင်း) တွင် ဤလက္ခဏာများသည် သိသာထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ ခွဲခွာခြင်း၏ လက္ခဏာများသည် ကန့်သတ်မထားသော လက္ခဏာများ ပါဝင်နိုင်သော်လည်း၊
အသံထွက်ခြင်း (ဟောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဟစ်အော်ခြင်း)
ခွဲထွက်ခြင်းစိုးရိမ်စိတ်ရှိသော တိရစ္ဆာန်များသည် ပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများမရှိသောကြောင့် ဤစိုးရိမ်မှုအဆင့်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစွာကို ပိုင်ရှင်များက သူတို့လိုအပ်သော အဖော်ကို လက်ခံမည့်အစား နေ့ခင်းဘက်တွင် တစ်ယောက်တည်း ထားကြသည်။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကို အချိန်အကြာကြီး တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်စွာ ထားခဲ့ခြင်းသည် ငြီးငွေ့ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အချို့သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည် ၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင်များက ၎င်းတို့ကို တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့သည့်အခါ အတိတ်တွင် အပျက်သဘောဆောင်သည့် အတွေ့အကြုံများ ရှိကောင်းရှိနိုင်သည် (ဥပမာ- မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကဲ့သို့ တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်)။
ဖတ်ရန်:7ခုနှစ် ခွေးများအတွက် အကောင်းဆုံးငါးဆီ 2022 မျိုး [အမျိုးအစားများ + အကျိုးကျေးဇူးများ]
မျိုးရိုးဗီဇသည် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ ခွဲထွက်ခြင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ရှိ၊ မရှိ စသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်၊ အချို့သော ခွေးမျိုးကွဲများသည် ရောဂါအခြေအနေ ပိုကျရောက်နိုင်ချေရှိသည်။
ခွဲခွာခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းသည် ပထမနေရာတွင် ပြဿနာမဖြစ်စေရန် သေချာစေခြင်းဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွင် ခွဲထွက်ခြင်းစိုးရိမ်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများစွာရှိပါသည်။
1. သင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို သင်နဲ့ဝေးရာကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထားခြင်းဖြင့် စတင်လိုက်ပါ။ ၎င်းတို့ကို အပြုသဘောဆောင်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမြဲထားခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် ထိုနေရာတွင် အဆင်ပြေကြောင်း သေချာပါစေ။
၎င်းတို့ကို အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်အတွင်း (ခွေးပေါက်လေးများအဖြစ် တစ်မိနစ် သို့မဟုတ် နှစ်မိနစ်ခန့်) တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ခြင်းဖြင့် စတင်ပြီး သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် ဝေးကွာသည့်အချိန်ကို တဖြည်းဖြည်းတိုးပေးပါ။
2. အိမ်မှာနေရင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အာရုံစိုက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပေါ်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပင်ပန်းသော အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်သည် ပိုမိုငြိမ်သက်သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။
3. သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် သင်အိမ်တွင်မရှိသည့်အခါ ၎င်းတို့ အနားယူနိုင်ပြီး လုံခြုံသည်ဟု ခံစားရနိုင်သော သတ်မှတ်ထားသော နေရာတစ်ခုရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ ၎င်းသည် သင့်အိမ်ရှိ လှောင်အိမ်၊ သေတ္တာ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော အခန်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို တစ်ယောက်တည်း အပျော်သဘောဆောင်ထားဖို့ အရုပ်တွေကိုလည်း ပေးသင့်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် အထူးကုသပေးသည့် အရုပ်များ သို့မဟုတ် ပဟေဠိများ သို့မဟုတ် ကျန်းမာပြီး သဘာဝခွေးက သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို ကိုက်စားနိုင်ပါတယ်။ မင်းမရှိချိန်မှာ မင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးဟာ တစ်ကိုယ်တော်ဘဝကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
4. သဘာဝအတိုင်း အေးချမ်းစေသော ဖြည့်စွက်စာများ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များတွင် ခွဲထွက်ခြင်းစိုးရိမ်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ ကာကွယ်သည့်အခါတွင်လည်း အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကတည်းက အိမ်မွေးခွေးများ၏ 70% ကျော်သည် စိတ်ပူပန်မှုဖြစ်တတ်သည်။၎င်းတို့ကို စိတ်တည်ငြိမ်စေရန် ဆေးညွှန်းဆေးများ မပါဝင်သည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေခြင်းသည် ရေရှည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပြုအမူကို ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဖတ်ရန်: သင့်ခွေးရဲ့ အစားအသောက်က ကျန်းမာပြီး သူတို့အတွက် သင့်တော်ကြောင်း ဘယ်လိုသေချာအောင်လုပ်မလဲ။
ဤထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကို စောစောစီးစီးအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် လမ်းခွဲသည့်မှတ်တိုင်သို့မရောက်စေရန်နှင့် ခွဲခွာခြင်းစိုးရိမ်စိတ်များ ပြည့်နှက်နေမှုကို တားဆီးနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် ခွဲခွာခြင်းအတွက် စိုးရိမ်သောကလက္ခဏာများ ပြသနေသည့် နေရာတွင် ရှိနေပါက၊ ၎င်းတို့၏ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေလျှော့ရန် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အရာအချို့ရှိပါသည်။
ခွဲခွာခြင်းစိတ်ပူပန်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အထက်ဖော်ပြပါ နည်းဗျူဟာများကို စမ်းသပ်ခြင်းအပြင်၊ သင်သည် အောက်ပါတို့ကို စမ်းကြည့်နိုင်သည်-
1. သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွင် သင်နှင့်ဝေးနေချိန်၌ ၎င်းတို့ကို သိမ်းပိုက်ထားရန် အရုပ်များနှင့် ဝါးရန်အရုပ်များ အများအပြားရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ သူတို့ဟာ အရင်က အရုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံ သိပ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်၊ သူတို့နဲ့ ကစားဖို့ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် အရုပ်တွေနဲ့ ကစားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် သူတို့ဟာ အရုပ်တွေရဲ့ စိတ်ကူးကို ကျင့်သုံးလာပါလိမ့်မယ်။
2. သူတို့ရဲ့ ချက်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ဟာ တိတ်ဆိတ်မနေဘဲ အပြင်မှာကြားနေရသမျှကို မတုံ့ပြန်မိစေဖို့ သေချာပါစေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက် နောက်ခံဆူညံသံများဖန်တီးရန် သင်သွားစဉ်တွင် တီဗီကိုဖွင့်ထားပါ (သို့သော်လည်း ၎င်းကို အလွန်ကျယ်လောင်စွာမလုပ်ပါနှင့်)။
အဆက်မပြတ် နောက်ခံဆူညံသံများ ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အဖြူရောင်၊ ပန်းရောင် သို့မဟုတ် အညိုရောင် ဆူညံသံစက်များ သို့မဟုတ် အက်ပ်များကို သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
စမတ်စပီကာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အိမ်တွင်မရှိသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင်အသံကိုပင် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
3. အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ခွန်အားတွေ များများပေးပါ။ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် တည်ငြိမ်အေးဆေးနေသည့်အခါ သူတို့ကို ချီးမွမ်းခြင်း၊ ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ချစ်ခင်ခြင်းများစွာပေးပါ။ ၎င်းသည် သင်အဝေးရောက်နေချိန်တွင် ၎င်းတို့ကိုပြသစေလိုသော အပြုအမူများကို အားဖြည့်ပေးပြီး ၎င်းတို့ကို အနာဂတ်တွင် ၎င်းတို့ကို ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်စေရန် ကူညီပေးပါမည်။
ဖတ်ရန်: ငါ့ခွေးက ဘာလို့ အရမ်းအိပ်နေတာလဲ။ အကြောင်းရင်း ၅
4. လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းကို လိုက်နာပါ။ ၎င်းသည် သင်သွားနေစဉ်တွင် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို မျှော်လင့်ရမည့်အရာအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကြံဥာဏ်ကိုပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ချိန်ညှိနိုင်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
ဥပမာ၊ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် ထမင်းစားချိန်၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် ကစားချိန်များအတွက် အိမ်သို့ တစ်ချိန်တည်းတွင် (တူညီသောဝင်ပေါက်ကိုအသုံးပြု၍) နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တစ်ချိန်တည်းတွင် တံခါးအပြင်ထွက်ကြည့်ပါ။
5. သင့်ဆရာဝန်ထံမှ အကြံဉာဏ်ရယူရန် စဉ်းစားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် သင်ထွက်ခွာသွားသောအခါတွင် အလွန်အမင်း စိတ်ဒုက္ခလက္ခဏာများ ပြသသည်ဆိုပါစို့။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်၊ သင်၏တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်သည် ၎င်းတို့အား စိတ်ပူပန်မှုနည်းစေပြီး ၎င်းတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေရန် ဆေးဝါးကို ညွှန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သုတေသနပြုချက်အရ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စိတ်ပူပန်မှုအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဝါးများ လေ့ကျင့်မှု သို့မဟုတ် အပြုအမူဆိုင်ရာ ကုထုံးအစတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ခွဲခွာခြင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ပိုမိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်။ သို့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို ၎င်းတို့မှ ဖြတ်ပစ်သင့်သည်။
ခွဲခွာခြင်းစိုးရိမ်မှုသည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတွင် တကယ့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အခါတွင် ၎င်းတို့၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် စိုးရိမ်သောက ဝေဒနာကို မည်သူမျှ မမြင်ချင်ကြပေ။
အကယ်၍ သင်သည် တက်ကြွပြီး အထက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်အချို့ကို စတင်အသုံးပြုပါက၊ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် အိမ်တွင်မရှိသည့်အခါ အေးအေးဆေးဆေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်ရပါမည်။ ခွဲခွာခြင်းအတွက် စိုးရိမ်သောကလက္ခဏာများ စတင်ပြသပါက၊ ဤအကြံပြုချက်များသည် ၎င်းတို့အား ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သော ကုသမှုကို ရရှိရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
View Post: 2,531
ယခင်ဆောင်းပါးသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွင် ဤလက္ခဏာ7ခုကိုတွေ့ပါက၊ အရေးပေါ်ကုသရေးဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးခေါ်ဆိုပါ။
next ကိုဆောင်းပါးထိပ်တန်း ခွေးပြေးစက် လမ်းညွှန်နှင့် သုံးသပ်ချက်များ (10)